Volan’olona 20 tapitrisa Ar nentina nitsoaka Ny rainy no nibaby ny heloka, natao antoka ny tranony
Nitrangana toe-javatra mampalahelo tany Andranomatsiko, fokontany Antanifotsy II ,
kaominina ambanivohitr’i Sambava. Tovolahy iray 30 taona no nitondra volan’olona 20 tapitrisa Ar avy nangalariny nandeha nitsoaka. Efa ho roa herinandro no tsy hita io tovolahy io ka ny ray niteraka azy no nosamborin’ny mpitandro ny filaminana ary natolotra ny fitsarana tany Antalaha. Nahazo fahafahana vonjimaika ny rain’ilay tovolahy na izany aza miandry ny fitsarana azy amin'ny 07 novambra ho avy izao. Nisy mantsy raharaham-pihavanana nataony izay nanekeny tsy fidiny hizaka ny heloka nataon’ilay zanany. Natao antoka ny trano fonenany sy tokotany mandrapahefany ilay volan’olona nangalarin-janany. Aza manody ny tranga tahaka itony. Zanaka tokony hanampy indray no mampibaby fahoriana ireo nahitana masoandro efa tokony hiandry valibabena.